महायज्ञमा दानदाता बढ्दै | Epradesh Today
Homeमुख्य खबरमहायज्ञमा दानदाता बढ्दै
तुलसीपुर, ६ कार्तिक । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ मा बाँसगढीमा जारी श्रीमद्भागवत ज्ञानमहायज्ञमा दैनिक रूपमा दानदाताको संख्या बढ्दै गएका छन् । महायज्ञमा मंगलबार ७ लाख ५१ हजार ७ सय ४९ संकलन भएको छ । महायज्ञ मूल आयोजक समितिका आर्थिक संयोजक नवीन कुमार पोख्रेलका अनुसार मंगलबासम्म २१ लाख ५२ हजार संकलन भएको छ ।
महायज्ञमा तुलसीपुर–१८ बिजौरी तल्लाघर स्वर्गीय टेकनप्रसाद उपाध्यायका सात भाइ सुपुत्रहरूबाट १ लाख ५४ हजार प्राप्त भएको छ । त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका सुपरिटेण्डेन्ट डा. सर्वेश शर्माले ३० हजार १ सय ११, तुलसीपुर–१९ दोघरेका श्रीधर रेग्मीले ३० हजार ५०, सोही ठाउँकै पदमप्रसाद रेग्मीले ३० हजार ५, तुलसीपुर–१९ हारिमेका विनयकुमार पोख्रेलले २६ हजार १ सय १, तुलसीपुर–१९ डाँडागाउँका राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका डा. प्रताप पोख्रेलले २५ हजार १ सय ५, तुलसीपुर–१९ थानगाउँका भैरव प्रसाद मजगैयाँले २५ हजार ५५ सहयोग गरेको आर्थिक संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मंगलबारसम्म २१ लाख ५४ हजार दान संकलन भएको छ । महायज्ञमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुँइचो रहेको थियो । आज राष्ट्रिय सभाका सदस्य कोमल वली सहभागी हुने मुल आयोजक समितिले जनाएको छ ।
साथै महायज्ञमा कथाश्रवण, पाठपारायण, धार्मिक नाट्यकलालगायतका विभिन्न कलाहरू नियमित प्रस्तुत गरिदै आईएको छ ।
कार्तिक ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञबाट संकलन भएको रकमले हिन्दुधर्म संरक्षण, सम्वद्र्धन र आन्तरिक पर्यटन तथा धार्मिक, साँस्कृतिक तीर्थस्थलको रूपमा विकास गरिने श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञ मुल आयोजक समितिले बताएको छ ।
महायज्ञमा दैनिकजसो दानदाता बढ्दै गएका छन् । महायज्ञको प्रमुख कथाबाचकमा रामचन्द्र तिमल्सिना र उपवाचकमा १०८ भागवतका अभियान्ता हरिचन्द्र तिमल्सिना रहेका छन् ।